बालुवाटारमा चल्यो दोहोरि,ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका अभियान्ता भोकभोकै सडकमा -
बालुवाटारमा चल्यो दोहोरि,ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका अभियान्ता भोकभोकै सडकमा
७ जेठ,काठमाडौं । पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता तथा सांसद माधवकुमार नेपाललाई कारवाही गरेका छन् । नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेपछि अध्यक्ष ओलीले कारवाही गरेका हुन् । यसअघि एमालेको केन्द्रीय र स्थायी कमिटी बैठकले कारवाही गर्ने सबै अधिकार अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई सुम्पिएको थियो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेता नेपाल, झलनाथ खनालसहित एमालेका २६ जना सांसदलाई कारवाही गरिएको पत्र ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई शितलनिवासमा पठाएका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
शुक्रबार दिउँसो शितलनिवासमै पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा बहुमतसहितको पत्र बुझाएका केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार फर्किएपछि अर्को पत्र लेखेका छन् । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेपछि ओलीले भण्डारीलाई पत्र लेखेका हुन् ।
पत्रमा ओलीले एमालेका केही सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको पाइएकाले छानविन गरिएको जनाएका छन् । ओलीले भण्डारीलाई पठाएको पत्रमा सांसदहरू दलप्रति प्रतिवद्ध हुने भएकाले कोही पनि पार्टी निर्णय बाहिर जान नसक्ने दाबी गरे । राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रको आशयबारे एमालेका उच्चस्तरीय एक नेताले भने,‘पार्टी विधानले अरु दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई दिएको छैन तर केही सांसदले हस्ताक्षर गरेको सुनिएको छ । यसबारे हामीले छानविन गरिरहेका छौं । छानविन नहुँदासम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइयोस् । यस्ता खाले राजनीतिक समाचार यतिबेला बिभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती आएका छन् ।
राज्या कुर्सिको लडाईमा,र ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका अभियान्ता सडकमा
कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दा र संक्रमितमा जटिल समस्या देखिंदा काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पतालमा बेड भरिनुका साथै प्रांगणमा राखेर समेत उपचार गरिएका समाचार यतिबेला सामाजिक संजालमा आईरहेका छन् । उपचार गराउन आउने संक्रमितको चाप उत्तिकै बढिरहेको छ साथै आईसीयू, भेन्टिलेटरसहितको बेड पनि भरिभराउ रहेका छन् ।
अघिल्लो हप्तासम्म टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पालजस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा अस्पतालबाहिर, बरण्डामा कुर्ची, बेञ्च तथा भुइँमा समेत राखेर संक्रमितको उपचार गरेका थियो । आजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ८ हजार ६०७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन् । परीक्षण गराएका २३ हजार २२६ नमूनामध्ये ८ हजार ६०७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । २२ हजार ३५३ जनाको पीसीआर विधिबाट र ८७३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा ८ हजार ६०७ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना भाइरसबाट १७७ जनाको मृ,त्यु भएको छ । यो सहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ हजार २४ पुगेको छ। बिहीबार मात्र १९० जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार ७ हजार ८९० जना कोरोनामुक्त भएका छन् । यस्तै हालसम्म १ लाख १६ जहार १९२ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् । ९१२ जना क्वारेन्टाइमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमितका उपचारका लागि अस्पतालमा बेड र अक्सिजन दुवैको अभाव हुन थालेको छ । बेड र अक्सिजनको अभाव हुँदा संक्रमितको उपचार नै प्रभावित भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले गुनासो गरेका छन् । बेडको अभाव हुँदा एउटै बेडमा बेड संख्या भन्दा बढी जनासम्म संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्नुपरेको अस्पतालका चिकित्सक डाक्टरले बारम्बार बताईरहेका छन् । अस्पतालमा संक्रमितका उपचारका लागि सञ्चालन गरिएका बेड आइसोलेसन वार्ड भरिभराउ भएपछि थप आएका संक्रमितलाई आकस्मिक कक्षको अब्जरबेशन वार्डमा अन्य रोगका बिरामीसँगै कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरिराखेको एका तिर पिडा छ ।
अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि बेडको अभावसँगै अक्सिजनको पनि कमी हुन थालेको चिकित्सकहरुले नै जानकारी दिएका छन् ।‘एकैपटक संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि उसले पनि समयमै चाहिएको जति अक्सिजन आपूर्ति गर्न भ्याइरहेको छैन।’‘संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ, तर न त भनेका बेला अक्सिजनको जोहो गरिएको छ, ढिला गरी अक्सिजन आएपनि बिरामीको उपचार बेलैमा हुदैन । समयमा बिरामी बोक्नको लागि एम्बुलेन्स पाईदैन । सर्वसाधारण यतिबेला मारमा पढेका छन् । सत्ता र भत्तामा बसेका देशका मन्त्री-प्रधानमन्त्री भने कोर्शिको लुछाचुँडी गरेर बसेका छन् । यतिबेला नेतालाई देश र जनता भन्दा कुर्सि प्यारो भएको छ । बिकट ठाउँमा अझै बिकराल अवस्था सृजना हुदै गएका छन् ।
देशका जनतालाई केहि हुनु हुदैन । बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो भन्दै कतिपय संघ-सस्था,पत्रकार,सामाजिक अभियान्ता निकै सक्रियरुपमा लागेका छन् । सडक भरि सुरक्षा क्रमि भरिभराउ छन् । कोरोनाको चपेटा एकातिर छ । खाना खान नपाएर पिडित एकातिर छटपटाई रहेका छन् । बिरामीहरु बेलैमा अस्पताल नपुग्दा,अस्पताल पुगेका बिरामीहरुले उपचार नपाउदा कैयौ ब्यक्त्तिले ज्यान फालेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाही,रबि लामिछाने,हेमराज थापा,ज्वाला संगौला,बिजय लामा,निखिल उप्रेती,डा :सुबास घिमिरे सर्बेन्द खनाल ,कर्ण बहादुर शाही,संजय अधिकारी,सन्जिता लुईटेल लगायतका व्यक्तित्व यतिबेला रात दिन भोक तिर्खा नभनी जनता बचाउनु पर्छ भन्दै खटिएका छन् । ज्ञानेन्द्र शाही अहिले जनताको दुख पिडामा मलम लगाउन दिनरात खटिएका छन् ।
कसैलाई अक्सिजन त कसैलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन ज्ञानेन्द्र शाहीले सहयोग गरिरहेका छन् । सरकार सुतेको भए पनि आफू जनताको लागि सकेसम्म सहयोग गर्ने वाचा शाहीले गरेका छन् ।”देश पुरै रुदा मान्छे मरिरहदा पद र कुर्सीका लागि लडने र रमिता गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वोलि र नेताहरू लाई सम्मानिय भन्न सकिदैन सम्माननिय शब्द को पनि अपमान हुन्छ । शाहीले नेता प्रति आक्रोसित स्टाटस समेत फेसबुक भरि लेखेका छन् । नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्रमुख भुमिका राज्यको दाहित्व हाे तर नेपालमा विडम्बना कुर्शीको लडाई चलेको छ । खै सरकारको ध्यान ? खै सरकार ? पुर्व देखि सुदुरपश्चिमका कुनाकन्दरा नियालेको खै ? खै बिरामीको उपचारमा सहज ? खै गरिब दुखिले खाना पाएको खै ? मर्नेबेला हरियो काक्रो ?
Previous जन्मभूमिमा जननीहरुको अभियानमार्फत प्रकाश जङ्गपन्त लगायतले गरे जनसेवक बालहित संरक्षण केन्द्रलाई सहयोग
Next संविधानलाई समाप्त गर्ने काम भएको भन्दै डा.शेखर कोइरालाले पोखे आक्रोश